सुरु भयो भर्चुअल शैक्षिक मेला, नौवटा कोर्समा पूर्ण छात्रवृत्ति
नेपाल एडुफेयर डटकमको 'चौथो भर्चुअल शैक्षिक मेला' सुरु भएको छ । नेपाल एडुफेयरले विगत वर्षमाझैँ यो वर्ष पनि प्लस टु उत्तीर्ण गरी स्नातक तहमा पढ्ने तयारी गरेका विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सो मेलाको आयोजना गरेको हो ।
मेलामा कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के–कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के–कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहजीकरण गरिने आयोजकले बताएका छन् ।
‘पहिले परामर्शका लागि विद्यार्थी कलेज धाउनुपर्ने बाध्यता थियो’, कार्यक्रमका संयोजक संविधान आचार्यले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजलाई जोड्न पुलको रूपमा भर्चुअल शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेका हौँ ।’
विज्ञान र प्रविधिको युगमा भर्चुअल मेलालाई नै अनुसरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
‘अहिले कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त छ । यस्तो अवस्थामा भर्चुअल मेलाको विकल्प छैन । तर, हामीले कोरोनाअगावै पनि भुर्चुअल रूपमा यस्ता मेलाहरू गर्दै आएका थियौँ । विज्ञान र प्रविधिको युगमा भर्चुअल मेलालाई नै अनुसरण गर्नुको विकल्प पनि छैन’, उनले भने ।
शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप
नौवटा विषयमा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
‘प्रत्येक वर्ष हामीले शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिपअन्तर्गत विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका छौँ । यो वर्ष पनि हामीले विद्यार्थीलाई नौवटा विषयमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछौँ’, उनले भने ।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्कलरसिप दिँदै आएको आयोजकको भनाइ छ ।
‘अघिल्ला वर्षमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूले अहिले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्कलरसिप दिँदै आएका हौँ । यसलाई हामीले प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै र छात्रवृत्ति पनि बढाउँदै आएका छौँ’, उनले भने ।
त्यस्तै, ८ माघदेखि प्रत्येक दिन साँझ ६ देखि ६ः३० बजेसम्म शिलापत्रबाट ‘एडु टक’ लाइभ कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ ।
कार्यक्रममा प्रत्येक दिन एक जनालाई एउटा मोबाइल गिफ्ट दिइनेछ । त्यस्तै, ई–सेवाबाट ल्यापटप र nepaledufair.com भिजिट गरेर ई–सेवामा क्लिक गर्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ क्यास ब्याक आउनेछ । २० गतेसम्म चल्ने मेलामा २० भन्दा बढी कलेजको सहभागिता छ ।
असल शिक्षा आवश्यक
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले असल शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताए ।‘असल शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । विध्वंस बनाउने शिक्षा होइन, असल शिक्षामा सन्ततिलाई डोर्‍याउनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
विद्यार्थीको रुचि के हो ? कस्ता विषय पढ्नेलगायतका विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्न भर्चुअल मेला फलदायी हुने उनको विश्वास छ ।
‘कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा भेला हुन गाह्रो छ । कलेजमा गएर बुझ्न पनि विद्यार्थीलाई कठिन छ । डिजिटलाइसेनलाई पनि जोड्दै जानुपर्छ’, उनले भने ।
भर्चुअल आजको आवश्यकता
ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका निर्देशक डा. देवराज पनेरूले कार्यक्रमको सफलताकाे शुभकामना दिँदै अब भर्चुअल रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘फिजिकल मात्र आवश्यकता छैन । भर्चुअलबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘शिलापत्रले भर्चअलमा नै ३ लाखलाई जोडेको छ । अब भर्चुअलबाट नै जानुपर्छ ।’
विद्यार्थीलाई निर्देश गर्न सफल
काठमाडौं मोडेल कलेजका प्रिन्सिपल सुरेन्द्र सुवेदीले शिलापत्रले विद्यार्थीलाई निर्देश गर्न सफल भएको बताए । ‘विद्यार्थीलाई शिलापत्रले निर्देश गरिरहेको छ । विद्यार्थी के बन्न खोजेको छ, त्यसमा सहयोग गरेको छ । कलेजहरूले पनि विश्वास गरेको छ’, उनले भने ।
अवसरबाट वञ्चित नबनौँ
शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले कलेजहरूले विश्वस्तरको शिक्षा दिएको बताउँदै छात्रावृत्तिमा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई आग्रह गरे ।
‘कलेजहरूले नेपालमै विश्वस्तरको शिक्षा दिएको छ । छात्रावृत्तिमा धेरै विद्यार्थीलाई जोड्न चाहन्छौँ । हिजोका दिनमा यस्ता अवसर हामीले पाउन सकेनौँ । अबको पुस्ता अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । छात्रावृत्तिमा फारम भर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गर्छु’, उनले भने ।
शिलापत्र मिडिया नेटवर्कका निर्देशक तथा कर्पोरेट अफेयर महेश राणाले एडुफेयर महाउत्सव रहेको बताए । ‘यो महाउत्सव हो । महाउत्सवको रूपमा लैजानुपर्छ । सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, १८:१४:००